भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अख्तियार- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अख्तियार
फाल्गुन १५, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘फायर साइड’ कार्यक्रममा अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेको अन्तर्वार्ता चित्तबुझ्दो लाग्यो  । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उहाँका योजना र थालेका कार्य उहाँले भनेजसरी अघि बढेमा राष्ट्रले अवश्य फाइदा लिन सक्नेछ  ।
सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने नीतिगत निर्णयको नामबाट हुने माथिल्लो तहको भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउनु पर्नेछ । अन्यथा सरकारको सुशासनलाई कहिल्यै पनि मद्दत पुग्ने छैन ।
निजामतीका माथिल्लो तहका सचिव तथा महानिर्देशकहरूलाई आआफ्ना अन्तर्गतका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोकथाम गर्न जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कुनै पनि मन्त्रालयको कुनै पनि तहमा भ्रष्टाचार भएमा या तोकिएको कार्य समयमा सम्पन्न नभएमा सबभन्दा पहिला त्यस विभागका प्रमुख या सचिवलाई जवाफदेही बनाएमा उनले आफै यस कार्यको छानबिन गरी तथ्य पत्ता लगाउन सक्छन् । अहिलेसम्म धेरै भ्रष्टाचार माथिदेखि तलसम्मका कर्मचारीका सेटिङमा हुँंदै आएका छन् । यसलाई अख्तियारले समेत प्रभावकारी कारबाही गर्नसकेको छैन । जो एक्ला–एक्लै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन््, तिनैमात्र अख्तियारको स्टिङ अपरेसनमा पर्दै आएका छन् । नत्र भन्सार, कर, मालपोत, सडक विभाग, यातायात विभाग, भूमिसुधारका ठूलठूला भ्रष्टाचारका घटना ज्यादै कममात्र बाहिर आएका छन् । जग्गा दलाल र भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा प्रायः सबै निजी बनाई पास गरिसकेका छन् । यसतर्फ अख्तियारको ध्यान अवश्य पुग्छ होला । वाइड बडी विमानको खरिदमा भएको कमिसनको खेल र अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकलाई हुने कारबाहीबाट पनि अख्तियारको कार्यान्वयन पक्ष कति बलियो छ ? देखिनेछ ।
– पूर्ण ओली, चावहिल, काठमाडौं
‘पाठकलाई घुस ९० करोडको अनियमितता लुकाउन’ पढ्दा अचम्म लाग्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक र लम्बोदर न्यौपाने बीचको समाचार चाखलाग्दो छ । उनीहरूको क्रियाकलाप र रवैया हेर्दा अहिले पनि शंकास्पद छ । थप अनुसन्धान गर्दा अरु पनि प्रमाण भेटाउन सकिन्छ । यसका लागि उनीहरूको पुरै जीवनको पाना पल्टाउनुपर्छ । र त्यो आवश्यक पनि छ । त्यसो गरिएन भने भ्रष्टाचार ढाकछोप हुन्छ । भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्छ । भ्रष्टाचार झन फैलिन्छ । जसले आफू स्वयं भ्रष्टाचारको खेती गरेर जीवन पालेका छन्, मोटाएका छन् र सारा परिवार देश/विदेश चहारेका छन्, उनीहरूलाई नै भ्रष्टाचार नियन्क्रण गर्न अख्तियारको आयुत्त बनाउँदा भ्रष्टाचार पाल्छन् कि नियन्त्रण गर्छन् ?
– राजेश विद्रोही, लहान, सिरहा
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०९:५२
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नयाँ काम गरेर देखाउने भएका छन्  । त्यो यस्तो महान काम हो कि मन्त्रीले काम गर्न नसेको भन्दै मन्त्रिपरिषदकै पुनर्गठन  ।
झुटा काम गरेर जनतालाई थाङ्नामा सुताउनुभन्दा त बरु कामै नगरेको वेश । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले आफूले ऐना हेर्न जान्नुपर्छ, अनि अरुको अनुहारको दाग देखाउन सुहाउँछ । उनले अहिलेसम्म गरेका कुन–कुन काम सफल भए ? त्यसको लेखाजोखा खोइ ? उद्घाटन गर्दै हिँड्ने हो भने त उनले पाँच वर्षमा गर्छु भनेका सबै कामको उद्घाट र शिलान्यास अहिल्यै गरिदिए भइहाल्यो नि । उनले तामझामसाथ उद्घाटन गरेका बिजुली बस अहिलेसम्म कति किलोमिटर गुडे ? पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे, तर उद्घाटनको भोलिपल्टै त्यो पनि बन्द भयो । मेलम्चीको पानी काठमाडौंको धारा–धारामा झर्छन् भनेको कतिपटक भयो ? ग्यासका सिलिन्डर कहिले विस्थापन हुने हो ? सबै नेपालीले पेटभरि भात खान पाउने र गरिब, दुःखी जनता भोकै–नाङ्गै भएर मर्न नपर्ने दिन कहिले आउने हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता धेरै आश्वासन पटक–पटक जनतामा देखाए, तर एउटै पनि पुरा भएनन् । अझ आश्वासनकै खेती गर्दैछन् । आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे उपलब्धि केही देखाउन नसकेपछि अब उनी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नतिर लागेका छन् । ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेडो’ भनेको यही हो ।